Taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hadlay dagaal culus oo ay la galleen Al-shabaab.
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guullo wax ku ool ah ka soo hooyeen dagaaallo culus oo ay la galleen xoogagga Al-shabaab ee ku sugan gobollada Labada Shabeelle.
Abaanduulaha ayaa sheegay in dagaalladii ugu danbeeyay ee dhacay ay ku bur buriyeen saldhigo Al-shabaab ay ku lahaayeen gobollada Shabeellaha hoose iyo Shabeellaha dhexe, isaga oo intaa ku darray in saldhigyada ay ciidamadu la wareegeen qaarkood ahaayeen kuwii laga soo abaabuli jiray sida uu hadalka u dhigay weerarada.
‘’Annagu waxaa uu qorshaheenu yahay in aan gaarno dhamaan deegaannada ay ku sugan yihiin Al-shabaab ka hor inta aysan roobabku si wanaagsan uga curran labada gobol’’ ayuu yiri Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka.
Dhinaca kale, dagaal culus oo maalintii shalay ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe ayeey sheegeen Al-shabaab in ay dib u qabsadeen deegaanno markii hore lagala wareegay.
Howlgaladan ayaa xoogeystay kaddib markii dhawaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ku dhawaaqay in la qaadayo duulaan ka dhan ah Ururka Al-shabaab(Hol)